Ajjeechaa aadde Biraanee Maammoorratti walqabatee namni hidhame hin jiru – Ayyaantuu Online
HomeAfaan OromooAjjeechaa aadde Biraanee Maammoorratti walqabatee namni hidhame hin jiru
Via Lammii Beenyaa, Adoolessa 25, 2018
Kaleessa yakkamtoota ajjeechaa suukanneessaa aadde Biraanee Maammoorratti raawwatan sadii qabneerra jechuun dubbi himaan MNO obbo Nagarii Leencoo dubbatanii turan. Haa ta’u malee odeeffannoo Waajjira Poolisii aanaa Sayyoo fi Waajjira Haqaa aanaa Sayyoo irraa arganneen namni to’annaa jala oole tokkoyyuu hin jiru. Dhimmi kun hatattamaan ummataaf ifa ta’uu qaba.
Gama biraatiin ammoo OPDOn ganama kana jaarsolii biyyaa waamaa jirti. Maatii gaddi itti galeef beenyaa kaffalla jedhaa jirti. Kunis tuffii guddaadha. Aadde Biraanee Maammoof kan malu beenyaa osoo hin taane haqa. Ajjeechaa kanaaf sababa kan ta’e namni akka ajjeefamuuf ajajni qaama olaanaarraa dabarfamuudha. Ani akka dhuunfaatti Poolisiin Oromiyaa waggaa darbe ummataaf dahoo ta’e har’a akkanumaan lafa ka’ee ummata ajjeesa jedhee hin amanu. Poolisiin waan ajajame raawwate. Kanaaf poolisii keenyatti quba qabuun natti ulfaata. Maddi rakkoo sanaa Finfinneedha. Qaama MNO ti. Haala kana keessatti beenyaa kaffaluu qofaan haqa awwaaluuf yaaluun yakka biraa babal’isuudha.
Dhimma kana gadi fageenyaan qulqulleessuuf koomishiinin walabaa hundeeffamee yakkamtoonni sirnaan qoratamanii namoota ajaja kennan, namoota dhukasa banan, namoota dubartii ulfa kana Ambuulaansii dhorkatan akkasumas namoota haqa ishee awwaaluuf odeeffannoo sobaa facaasan sirnaan qorachuun ummataaf ifa taasisuu; yakki suukanneessaan akkasii lammata qe’ee Oromootti akka hin raawwatamneef maqaa aadde Biraanee Maamoon yaadannoon tokko hundeeffamuu, yaadannoon kunis foundation dhalootni irraa baratu ta’uu qaba. Kanaachi akkuma baratame beessee itti darbachuudhaan dhugaa awwaalanii galuun yakka dabalataaf karaa saaquu taati. Haqa aadde Biraanee galchuuf hundi keenya itti gaafatamummaa qabna.